Iyo iPhone 8 uye 8 Plus yatove kuwanikwa pane yakadzorerwa webhusaiti | IPhone nhau
Apple inoenderera nekuwedzera akasiyana iPhone mamodheru mu yako webhu chikamu cheyakagadziridzwa michina kubva kuUnited States, uye panguva ino kwaive kuchinjika kwemidziyo yanga iri pamusika kweinopfuura gore, iyo iPhone 8 uye iyo iPhone 8 Plus.
Isu parizvino hatina kugadziridza mamodheru e iPhone mune dzimwe nyika kunze kweUS uye isu takamirira Apple kuti itange kuvatengesa nekuti zvirokwazvo vashandisi vazhinji vangafunga nezve kutenga kwavo. Parizvino izvo zvatinazvo munyika yedu ivo vari iPad, Mac uye Apple TV.
Zvigadziriswe kana kugadziriswa zvigadzirwa zvakafanana nezvitsva
Hatimboneta kudzokorora kuti izvi zvishandiso zvakaiswa naApple mukutengesa muchikamu chakadzoreredzwa chinogashira chakasimba chiitiko chekudzorera kuitira kuti kana chasvika pamaoko edu chitarisike chaizvo sechinhu chitsva chigadzirwa. Zvakare vese vanofanirwa sangana neApple mhando yemhando Uye ndosaka ichi chichiwedzera garandi yegore rimwe mukuwedzera pane sarudzo yekuwedzera AppleCare yekuwedzera kufukidza kwenguva refu.
Pa webhusaiti Apple.com iwe unowana ese aya ma iPhone 8 uye 8 Plus (yeiyo yekupedzisira parizvino hapana kuruboshwe) muchikamu chakagadziridzwa. Chokwadi ndechekuti ivo zvakare vane iyo Apple Watch uye yakawanda yakawanda stock yezvose zvigadzirwa zviripo pane kwete pano, chimwe chinhu chakasarudzika asi isu tinoda kuti ive yakafanana pasirese. Imwe pfungwa yavanoburitsa pachena pane ino webhusaiti izvozvi patinotaura nezveApple Watch, ndeyekuti kana ari mawadhi akangwara, kana achida mamwe ekutsiva, haana kuiswa muzvigadzirwa zveApple zvakadzoreredzwa, vanongowedzera mawachi ane kukanganisa kwesoftware kana iyo inouya kubva kudzoka kunopinda mukati memazuva gumi nemashanu, zvinoreva kuti izvo zvigadzirwa "zvitsva". Asi panguva ino zvese izvi ndezvevatengi veApple chete muUnited States, senge iyo iPhone yavanayo muchikamu chino kubva pa iPhone 7 kuenda ku iPhone 8.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 8 » Iyo iPhone 8 uye 8 Plus yatove kuwanikwa pane yakadzorerwa webhusaiti
Jony Ive pane Apple Zvitsva Zvigadzirwa: "Usazviite Zvakasiyana, Zviite Zvirinani"